Clever Ads Slack एकीकरण ... तपाईंको समय बचत गर्न निर्मित!
clever ads संग लग इन गर्नुहोस् Slack
संग लग इन गर्नुहोस् Slack
Google Ads , माईक्रोसफ्ट विज्ञापन र फेसबुक विज्ञापनहरूको लागि Slack
Slack एकीकरणको साथ च्याट मार्फत प्राप्त गर्न तपाईंको अनुकूलन सचेतहरू कन्फिगर गर्नुहोस्
रेखांकन र मापन तपाईंको खाता 'प्रदर्शन गर्न pertaining प्राप्त
च्याट मा तपाईंको मापन प्राप्त लागि दैनिक वा साप्ताहिक रिपोर्ट तालिका
Clever Ads ढिलो एकीकरण को लाभ
हाम्रो Slack एकीकरणको साथ, तपाईंले त्यो बिहानको कफीको आनन्द लिनको लागि पर्याप्त समय बचत गर्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई धेरै मनपर्दछ! ☕
यो एक समय रक्षक हो
तपाईसँग एउटा कम ट्याब खोल्न सक्नुहुन्छ, जसले सब भन्दा महत्त्वपूर्ण Google Ads , बिंग विज्ञापन र फेसबुक विज्ञापन मेट्रिकहरू एक ठाउँमा देखेर समय बचत गर्छ।
राम्रो दिन कार्यहरू गर्न आफ्नो दिन संगठित
यस Slack एकीकरणले मेट्रिकहरू, ग्राफहरू, र सारांशहरू सिधा Slack च्याटमा अभियानहरूको प्रगति ट्र्याक गर्न यसलाई सम्भव बनाउँदछ।
यो निःशुल्क छ!
बजारमा उस्तै उपकरणहरूसँग तुलना गर्न जुन भुक्तान आवश्यक पर्दछ, Clever Ads तपाईंसँग यसको प्रयोगको लागि शुल्क तिर्दैन।
Google Ads , माईक्रोसफ्ट विज्ञापनहरू र फेसबुक विज्ञापन खाताहरू फिल्टर गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै रूचि दिन्छ र उनीहरूको प्रदर्शनको मेट्रिक्स र ग्राफहरू प्राप्त गर्दछ।
Slack एकीकरणको साथ तपाईंको आफ्नै ड्यासबोर्डमा पहुँच प्राप्त गर्नुहोस् र स्लाक मार्फत तपाईं आफ्नो मेट्रिक्स प्राप्त गर्न चाहानुभएको तरिकालाई अनुकूलन गर्नुहोस्। विज्ञापन खाता फिल्टर गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई सब भन्दा चासो राख्दछ र तपाईंको रिपोर्टहरू शेड्यूल गर्दछ।
Clever Ads सुस्त एकीकरण किन स्थापना गर्ने?
Google Ads , माईक्रोसफ्ट विज्ञापन, र फेसबुक विज्ञापन अभियान प्रदर्शन जस्तै छाप, रूपान्तरण, क्लिक, र अधिक Slack सिधा उपलब्ध हुनेछ महत्वपूर्ण मेट्रिक्स।
आफ्नो रुचि मेट्रिक को विकास (छाप, लागत, रूपांतरण, आदि) तपाईंको चयन विज्ञापन खाताहरूको हेर्न ग्राफ लागि सोध्नुहोस्। को भनाइ जान्छ रूपमा, एक तस्वीर लायक एक हजार शब्द हो।
तिनीहरूलाई आफ्नो टीम को लागि सार्वजनिक वा प्रत्यक्ष सन्देश विकल्प छानेर आफैलाई तिनीहरूलाई राख्न आफ्नो रुचि च्यानलमा साप्ताहिक आफ्नो मापन सारांश दैनिक प्राप्त /।
यस Slack Google Ads वा फेसबुक विज्ञापन रणनीति सुधार गर्न सुझावहरूको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी अभियानको बिभिन्न प्रकार थप्ने, अभियानको बजेट समायोजन गर्ने, वा अभियान लक्ष्य परिमार्जन गर्ने जस्ता चीजहरूको सुझाव दिन सक्षम हुनेछौं।
Slack एकीकरणको साथ कसरी सुरू गर्ने
केवल एक मिनेटमा, तपाईं आफ्नो खातामा Clever Ads
Slack एकीकरण स्थापना गर्नुहोस्
Slack थप्नुहोस्" बटन क्लिक गरेर Slack Clever Ads अनुप्रयोग थप्नुहोस्।
आफ्नो Google, माइक्रोसफ्ट, र / वा फेसबुक खाता प्रयोग गरेर लग इन गर्नुहोस् तपाईंको विज्ञापन खातामा लिङ्क।
तपाईंको खाता चयन गर्नुहोस्
आफ्नो वांछित खाता चयन गर्नुहोस् र कुनै पनि समयमा आफ्नो धेरै खाताहरू बीच स्विच गर्नुहोस्।
यस स्ल्याक एकीकरणको Slack
सारांश, ग्राफहरू, आदि को लागी Slack बोट सोधेर रिपोर्ट प्राप्त गर्न सुरु गर्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग एउटा प्रश्न छ कि तल उत्तर दिईएको छैन भने तपाईं हामीलाई
Slack एकीकरणले वास्तवमा के गर्छ?
हाम्रो Slack एकीकरणको उद्देश्य तपाईको जीवन अलि सजिलो बनाउनु हो र हामी "तपाईलाई त्यो बिहानको कफीको आनन्द लिन पर्याप्त समय बचाउन चाहन्छौं जुन तपाईले यति धेरै माया गर्नुहुन्छ।" Google Ads खाता लिंक गर्नुभयो जुन तपाईंसँग काम गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं आफ्नो Slack वा Microsoft Teams च्याटमा सिधै बोटलाई टेक्स्ट गरेर मेट्रिक्स र ग्राफहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस तरीकाले, तपाईं आफ्नो बहुमूल्य समय बचत गर्दै हुनुहुन्छ किनकि तपाईंले प्रत्येक दिन Google Ads
चेतावनीहरू : तपाइँको विज्ञापन खाता संग अधिक सुरक्षित महसुस। Clever विज्ञापनको बोटले तपाईंलाई सूचित गर्नेछ यदि तपाईंको खातामा केहि अनौंठो भइरहेको छ।
Slack एकीकरण १००% नि: शुल्क छ!
Slack एकीकरण सही रूपमा चल्नको लागि, यसलाई तपाईंको Google Ads खाताबाट डाटा आवश्यक पर्दछ। सुरक्षा उद्देश्यका लागि गुगलले कसैलाई पनि तपाईंको मेट्रिक्स पूर्वनिर्धारित रूपमा हेर्न अनुमति दिदैन, त्यसैले हामीलाई तपाईंको अनुमति चाहिन्छ। Google Ads खातामा निम्न स्तरको पहुँच आवश्यक पर्दछ जुन भनिन्छ "तपाइँको Adwords अभियानहरू प्रबन्ध गर्नुहोस्"। यो अनुमतिको मात्र प्रकार हो जुन हामीलाई तपाईंको मेट्रिकमा जाँच गर्नका लागि चार्ट र सारांश उत्पन्न गर्न हामीलाई मात्र अनुमति दिनुपर्दछ।
Clever Ads Slack एकीकरणको बारेमा अधिक
Slack एकीकरणको बारेमा बढि जान्नुहोस् जुन तपाईंलाई रिपोर्टहरू स्वचालित गर्न र तपाईंलाई समय बचत गर्न मद्दत गर्दछ।
के Clever Ads स्लैक एकीकरण प्रदान गर्दछ
Clever Ads Slack एकीकरणले हाल हाम्रो प्रयोगकर्ताहरूलाई अधिकतम उपयोगिता र उत्पादकता प्रदान गर्न अत्यधिक मूल्यवान सुविधाहरूको एक श्रृंखला प्रदान गर्दछ। सबै सुविधाहरू सकेसम्म सान्दर्भिक हुनको लागि प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रिया र प्रयोगको आधारमा डिजाइन गरिएको हो।
एक पटक प्रयोगकर्ताहरूले अनुप्रयोग स्थापना, तिनीहरू तिनीहरूले बोट, तालिका रिपोर्ट र कन्फिगर अलर्ट कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नै व्यक्तिगत ड्यासबोर्डमा पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्। प्रयोगकर्ता पनि बढी टोली सदस्यहरूले एकीकरण विशेषताहरूले आनन्द गर्न अनुप्रयोग प्रयोग गर्न आमन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ।
Slack एकीकरण लाभ र लाभहरू
Clever Ads ' Slack एकीकरण' मार्केटिंग टीमहरूका लागि राम्रो उपकरण हो जुन उनीहरूको आफ्नै व्यवसायको विज्ञापन अभियानहरू प्रबन्ध गर्छन्, तर विज्ञापन एजेन्सीहरूका लागि जुन अन्य कम्पनीहरूको अभियानहरू प्रबन्ध गर्छन्।
तपाईं अलर्ट सुविधाहरू सुरक्षित रहनको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र निश्चित हुनुहोस् कि तपाईंले केहि पनि याद गर्नुहुने छैन। तपाईले चाहानु भएको धेरै सतर्कताहरू कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको मनपर्दो विज्ञापन खाता चयन गरेर र त्यसपछि तपाईले चाहनुभएको मेट्रिक जुन तपाई ट्र्याक राख्न चाहानुहुन्छ। तपाईं आफ्नो अलर्ट कन्फिगर अतिरिक्त मद्दत चाहिन्छ भने, हामीलाई एक इमेल पठाउन संकोच छैन assistant@cleverads.com "> assistant@cleverads.com
तपाईं सधैं हामी तपाईंको लागि सिर्जना गर्ने पूर्व निर्धारित सतर्कता केही प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्छन् र एक पटक तपाईं आफ्नो ड्यासबोर्डमा पहुँच तपाईंले तिनीहरूलाई उपलब्ध हुनेछ।
-अनुप्रयोग सर्वश्रेष्ठ अभ्यासहरू
स्ल्याक च्याटले प्रयोगकर्ताहरूलाई छिटो र सजिलैसँग तिनीहरूको अनुप्रयोगको प्रकार्यहरू पहुँच गर्न सर्टकटहरू प्रस्ताव गर्दैछ। तपाईं यी सर्टकटहरू प्रतीक अन्तर्गत फेला पार्न सक्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गरेर, स्क्रोल गर्नुहोस् जबसम्म तपाईं सर्टकटहरू पाउनुहुन्न जुन Clever Ads बोटले प्रस्ताव गर्दछ। तपाईं द्रुत रूपमा मेट्रिक्स, ग्राफहरू, एक मासिक तुलना, वा तपाईंको Google Ads र फेसबुक विज्ञापन रणनीतिहरूलाई कसरी अनुकूलित गर्न सकिन्छ भन्ने सुझावहरूको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ।
तपाई सजिलै Slack बोटलाई पाठ पठाउन सक्नुहुन्छ कार्यहरूको लागि सोध्नुहोस् तपाईले यो प्रदर्शन गर्न चाहानुहुन्छ। यहाँ तपाईले टाइप गर्न सक्ने सबै शब्दहरू छन् र बोट डेटाको साथ जवाफ दिनेछ:
मेनु: बोट लागि मेनु पट्टी खोल्न हुनेछ ताकि तपाईंले यसलाई प्रदर्शन गर्न चाहेको कार्य प्रयोग गर्न सक्ने।
मेट्रिक्स: Clever Ads बोटले तपाईंलाई तपाईंको चयनित मेट्रिक्सको सारांश देखाउँदछ।
क्लिकहरू: यो पाठले बितेका days दिनमा क्लिकको विकासको ग्राफ प्रदर्शन गर्दछ। छाप, रूपान्तरण, लागत, CTR, CPC को लागि समान परिणामहरू प्राप्त गर्नुहोस्। टिप: Google Ads र / वा फेसबुक विज्ञापन खाताहरूको लागि तपाईंलाई सल्लाह दिन्छ।
रिपोर्ट: प्रदर्शन आफ्नो निर्धारित रिपोर्ट को सूची।
तपाईंको मनपर्ने च्यानलहरूमा Clever Ads स्लक बोटलाई आमन्त्रित गर्न निश्चित गर्नुहोस् / टाइप गरेर @CleverAds। त्यसो गरेर, तपाईं बोटलाई तपाईं मेट्रिक्स, रिपोर्टहरू, र निर्दिष्ट च्यानलमा ग्राफहरू पठाउन सोध्न सक्नुहुनेछ। तपाईं आफ्नो रिपोर्टहरू पनि तयार गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले ती च्यानलहरूमा प्राप्त गर्नुहुनेछ जहाँ बोट आमन्त्रित गरिएको छ। याद गर्नुहोस् कि यदि बाटलाई च्यानलमा आमन्त्रित गरिएको छैन भने, तब तपाईले आफ्ना रिपोर्टहरू र सचेत ड्यासबोर्डमा कन्फिगर गर्दा चयन गरिएको विकल्पको रूपमा तपाईं च्यानललाई देख्न सक्नुहुन्न।
तपाइँको पीपीसी अभियानहरू तपाइँको टीमको बाँकीसँग छलफल गर्न सक्षम हुन यो एक ठूलो सुविधा हो। यदि तपाईं आफ्ना ग्राहकहरूको लागि अभियानमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं तिनीहरूलाई Slack च्यानलमा आमन्त्रित गर्न सक्षम हुनुहुनेछ र अभियानको विकास र परिणामहरू साझेदारी गर्नुहोस् जुन तपाईं तिनीहरूको लागि प्रबन्ध गर्दै हुनुहुन्छ।